यिनै हुन् जीप दु’र्घ,टना हुदा भाग्यले बा,चेका बेहुला बेहुली , एकै घरका ३ सहित ८ को मृ”त्यु - ABNews Nepal
यिनै हुन् जीप दु’र्घ,टना हुदा भाग्यले बा,चेका बेहुला बेहुली , एकै घरका ३ सहित ८ को मृ”त्यु
Feb 5, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, galaxy 4k, ganga lama, headline nepal, kapurbot tv, katathmandu news, latest khabar, latest news, latest ramailo samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
प्यूठानमा बेहुला बेहुलीसहित जन्ती बोकेको जिप दु’र्घटनामा ज्यान गुमाउने आठ जनामध्ये बाबु छोरीको पहिचान खुलेको छ। प्यूठानका प्रहरी प्रमुख सत्यनारायण थापाका अनुसार जिल्लाको नौंमुखी गाउँपालिका वडा नं. ६ जिनावबाङका ३९ वर्षीय बुवा वसन्त खड्का र उनकी ११ वर्षीया छोरी एलिसा
खड्काको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक अन्य ६ जना मृतकको पहिचान खुली सकेको डिएसपी थापालले बताए । जिप सडकदेखि ३०० मिटर तल खोल्सामा खसेको छ।
जिल्ला प्रह’री प्रवक्ता प्र’हरी निरीक्षक देवीप्रसाद गैरेका अनुसार दु’र्घटनामा परि पाँच महिला र तीन पुरूषसहित आठ जनाको मृ’त्यु भएको छ। छ जनाको घ’टनास्थलमै र २ जनाको अस्पताल पुर्‍याएपछि मृ’त्यु भएको प्रवक्ता गैरेले जानकारी दिए। बेहुला बेहुलीसहित पाँच घा’इतेको जिल्ला
अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बेहुला-बेहुली दुवैको अवस्था ग’म्भीर रहेको जिल्ला प्र’हरी प्रमुख थापाले जानकारी दिए। दु’र्घटनास्थल निकै विकट भएकाले घा’इतेको उद्धार गर्न तथा अस्पताल पुर्‍याउन कठिन भएको प्र’हरीले जनाएको छ।
नौबहिनी गाउँपालिकाको लुङ लेखबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकाको लिवाङ जाँदै गरेको ग १ ज ५०९२ नम्बरको जिप ओखरपाटामा शनिबार बिहान ३ बजे दु’र्घटनामा परेको थियो। रातभर पानी परेको र बाटो चिफ्लो भएका कारण दु’र्घटनामा परेको प्रह’रीले जनाएको छ। अहिले भने वर्षा रोकिएको छ।
यस्तै,पाल्पामा एक पुरुष लडेको अवस्थामा मृ’त फेला परेको प्र’हरीले बताएको छ । मृ’त्यु हुनेमा तानसेन नगरपालिका ४ वडिगान टोल बस्ने ३८ वर्षीय बसन्त गीरी रहेको जिल्ला प्र’हरी कार्यालय पाल्पाले जानकारी दिएको छ । शनिवार बिहान ८ बजे सोहि वडाको सिलखनटोल स्थित पक्कि सडक खण्डको नजिकै भित्तामा घोप्टो अवस्थामा मृ’त फेला परेको प्र’हरीले बताएको छ । उक्त घ’टना सम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको प्र’हरीले जानकारी दिएको छ ।
स्याङ्जाबाट नवलपुरको गैंडाकोट दुलही लिन गएको कार पोखराको तालचोक सडकखण्डमा दु’र्घटनामा परेको छ । बेहुला चढेको ग २ च ८५५२ नं.को कार र ग २ च ३११७ नं. को जीप दुर्घटनामा परेका हुन् । पूर्वान्ह ९ः५० बजेको समयमा भएको दु’र्घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने नभएको
प्र’हरीले जनाएको छ । दुवै सवारी पोखरातर्फबाट एकै दिशामा जाँदै थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार जीपले अगाडिको कारलाई पछाडिबाट ठ’क्कर दिई नालीमा पुर्याइदिएको हो । सिधा र सहज बाटो भएकाले ठूलो दु’र्घटना हुनबाट टरेको छ ।
घ’टनास्थलमा रहेका ट्राफिक प्र’हरी नायव निरीक्षक सुमन निउरेका अनुसार कारमा सवार बेहुला आँधिखोला ३ का २८ वर्षीय दीपक खत्री, कार चालक सोहि स्थानका ३६ वर्षीय डिल्लीराम सुवेदीसहित बेहुलाका बुवा, दिदीहरु सबै सकुशल छन् । दुर्घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भैरहेको डाँडानाक प्रहरी चौकीले जनाएको छ । सई निउरेका अनुसार दुवै सवारी नियन्त्रणमा लिएर चालकहरुसँग घटना सम्बन्धमा बयान लिने काम चलिरहेको छ ।
यस्तै,,ह”त्या आ’रोपी ११ वर्षपछि प’क्राउ परेका छन् । प्र’हरीले नेपालगञ्जका २१ वर्षीय हिमलाल बुढालाई अ’पहरण गरी कोहलपुरमा लगेर ह”त्या गरेको आ’रोपमा शौभाग्य मल्ल ११ वर्षपछि प”क्राउ परेका छन्। जिल्ला प्र’हरी कार्यालय, बाँकेका प्रवक्ता डीएसपी मधुसुदन न्यौपानेले मल्ललाई
गोरखाबाट प’क्राउ गरिएको जानकारी दिए। बाँके प्रह’रीका अनुसार शौभाग्यलाई गोरखाबाट ल्याउने तयारी भएको छ। २०६७ माघ ३ गते पाँच जना मिलेर हिमलाललाई नेपालगञ्जको धम्बोझीबाट अपहरण गरेर कोहलपुर पुर्‍याएका थिए।
घ’टनामा संलग्न भन्दै जिल्ला अदालत, बाँकेले घ”टनामा संलग्न प्रशान्त मल्ललाई कर्तव्य ज्यानमा जन्मकैद, अपहरणमा नौ वर्ष कैदसहित ५० हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो कोहलपुरमा एउटा खाली घरगोठमा बन्धक बनाएर हिमलालका परिवारसँग ३५ लाख फिरौती मागिएको थियो। तर, पोल
खुल्ने भएपछि अपहरणकारीले तारले घाँटी कसेर हिमलालको हत्या गरेका थिए। ह”त्यापछि हिमलालको अनुहार ज’लाइएको प्र’हरीले जनाएको छ । २०६९ असार ६ गते अदालतले उक्त फैसला सुनाएको थियो। दैलेखका कृष्ण थापा जमानीमा छुटेका थिए। नेपालगञ्जका शौभाग्य मल्ल फरार थिए।
नेपाली नायिकाहरु कसले कति पढेका छन्, पुरा हेर्नुहोस।
भाग्य न्यौपाने सम्झेर अशोक दर्जिकी फुपू रुदै आइन मिडियामा अशोक पुगे फुफु भेट्न